नेपालमा एशियन स्तरको प्रतियोगिता गर्न पाउनु गर्वको कुरा हो
Tuesday, 12 Nov, 2019 2:53 PM
शनिवारदेखि काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा सुरु भएको मदन भण्डारी मेमोरियल एशियन एमेच्योर चेस च्याम्पियनशिपमा विभिन्न मुलुकका ८२ खेलाडीको सहभागिता रहेको छ । यो प्रतियोगिता अन्तराष्ट्रिय स्त्तरको प्रतियोगिता हो । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना कसरी संभव भयो ? प्रतियोगिता कसरी चलिरहेको छ ? र नेपालमा चेस खेलको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विविध विषयमा चक्रपथ डटकमका लागि आशिष पौडेलले नेपाल बुद्धिचाल संघको अध्यक्ष तथा मदन भण्डारी मेमोरियल एसियन एमेच्योर चेस च्याम्पियनशिप- २०१९ को संयोजक एकलाल श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
यो खेल को तयारी कहिलेबाट सुरु भएको हो ?
यो एसियन चेस फेडेरेसनको आधिकारिक अफिसिअल टुर्नामेन्ट हो । यो टुर्नामेन्ट चेस समिट हुँदा खेरि हामीले त्यहाँ बिड गर्यौ र त्यहाँ अरु एसियन राष्ट्रहरुको पनि इन्ट्रेस्ट थियो । ओमान र नेपालबीच यो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने दाबी गरिरहेको थियो। तर हामीले भोटिङ गरेर यो प्रतियोगिता नेपालमा ल्याउन सफल भएका हौ । यो गत सेप्टेम्बरमा हामीले बिड गरेर प्राप्त गरेको प्रतियोगिता हो ।
मदन भण्डारीको नाम पनि जोडिएको छ यस प्रतियोगितामा, किन होला ?
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीसंग हामीले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गर्यौ र उहाँहरुले यसलाई स्विकार्नु भयो र यस अगाडी पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय धेरै खेलकुद प्रतियोगिताहरु उहाँहरुले गर्दै आउनु भएको थियो । त्यसकारणले चेस पनि एकपटक गरौ भनेर भन्न खोज्नु भो यसरी हामीले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्यौ ।
संयुक्त रुपमा यसलाई आयोजना गरे पछाडी यो एसियन एमेच्योर च्याम्पियनसिपलाई केही नाम दिन सक्ने अन्तराष्ट्रिय नियम भएको हुनाले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले मदन भण्डारी मेमोरियलको नामबाट यो टुर्नामेन्ट आयोजना गरौ भनेर प्रस्ताव गर्नु भयो र पछि हामीले यसलाई सहर्ष स्विकार्यौ ।
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी बाहेक अरु कुनै संस्थासंग कुराकानी भएको थियो?
सुरुमा हाम्रो मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी संग कुरा भयो र यो प्रस्ताव उहाँहरुले स्विकार्नु भयो, नगरेको भए हामीले अरु कसैसंग कुराकानी गर्थ्यौ होला वा हामी एक्लैले आयोजना गर्थ्यौ होला ।
मदन भण्डारीलाई हजुरले कसरी चिन्नु हुन्छ ?
मदन भण्डारी एउटा तत्कालिन नेकपा एमालेको महासचिव नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यस पार्टीलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त पास गरेर त्यही अनुसार बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पार्टी चलाउने काम गर्नुभयो । भण्डारीले जवजको सिद्धान्त र कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो भने त्यो कार्यक्रमलाई तत्कालिन नेकपा एमालेले फलो गरेको थियो । पछि उहाँको हत्या भएपछि मदन भण्डारीको नाममा धेरै संघ संस्था खुले उहाँकोे बिचार, व्यक्तित्व र भिजनलाई जीवन्त बनाउनको निम्ति स्पोर्टसको माध्यमबाट मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले गतिविधि गर्दै आइरहेको कुरा हामी बुझ्छौ ।
चेस प्रतियोगिता कसरी अगाडी बढ्दै छ ?
धेरै राम्रो भइरहेको छ । प्रतियोगिता राम्रै प्रतिस्पर्धामा छ । अहिलेसम्म ३ गेम सम्पन्न भयो । अब चौथो राउण्ड सुरु हुन्छ । यसमा राम्रो पक्ष भनेको नेपाली खेलाडीहरु शिर्ष स्थानमा छन् । विजय भइरहेको छ । राम्रो परफर्मेन्स गरिरहेको छ । हाम्रो आशा र अपेक्षा पनि नेपाली खेलाडीहरुले मेडल प्राप्त गरोस्, उनीहरुको गेम अझ उत्कृष्ट होस् र बिदेशी खेलाडीहरुसंगको प्रतिस्पर्धामा खारियोस भन्ने हो ।
नेपालमा चेसको स्कोप कस्तो छ र कति जना खेलाडीहरु छन् ?
नेपालमा ठ्याक्कै यतिकै सदस्य भनेर भन्या छैन हामीले जिल्ला जिल्लालाई मेम्बर बढाउनको निम्ति छुट दिएका छौ । जिल्ला संघ हाम्रो मेम्बर हुन्छ त्यही भएर यकिन भन्न सकिन्न यसमा ३०–३५ हजार नै मेम्बर हुन सक्छ । तर दुर दराजमा चेसको ट्रेनर्सहरु नपुगेको कारणले गर्दा केही समस्या उत्पन्न भएका छन् । चेस खेल बिगतको तुलनामा धेरै अगाडी बढिसकेको छ । नेपालमा बिगतमा एउटा स्थानीय तहमा मात्रै एउटा गेम प्रतियोगिता हुन्थ्यो भने आज त्यो चरणलाई नाघेर नेशनल लेभलको धेरै प्रतियोगिताहरु हुन्छ र त्यस माथि पनि अझ हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत दिन थालिसक्यौ । यो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो एशिया लेभलको पहिलो प्रतियोगिता हो । अब हामीले यस प्रतियोगिता गरिसके पछाडी यसको अनुभव र यसबाट प्राप्त गरेको उर्जालिई हामी यो भन्दा राम्रो प्रतियोगिता संचालन गर्ने अभ्यासमा जाने छौ ।
यस प्रतियोगितामा कति जना खेलाडी खेल्छन र एकपटकमा कति जना खेल्छन ?
यहाँ सहभागी हुने ८२ जना खेलाडी छन् । सबै खेलाडीले ९ राउण्ड सबैसंग नै खेल्छन, टोटल ९ राउण्ड हुन्छ । ९ राउण्ड खेलिसके पछी जसको पोइन्ट बढी आउछ, जसको परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ विजय उही हुन्छ, यसमा नकआउट चरण वा बाहिरिने कुरो हुदैन ।
प्रत्येक राउण्डमा विजय हुने खेलाडीहरुले प्वाइँट पाउछ र तेही प्वाइन्टको आधारमा पछि काउन्ट भएर विजय खेलाडी घोषणा हुन्छ ।
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को प्रबर्धन यस खेलबाट कसरि हुँदै छ ?
हामीले अनौपचारिक रुपमा कुरा गरिराखेका छौ खेलाडीहरुसंग र यहाँ हामीले लोगो पनि राखेका छौ यसले पनि सबैले बुझिनै हाल्छ । अब गेम हुने बेला एकदम शान्तमै खेल्नु पर्ने भएको हुनाले खेल्ने बेलामा हामी त्यो कुराहरु गर्दैनौ । हामी सबै बिदेशी खेलाडीहरुलाई नेपालको राम्रो राम्रो घुम्ने स्थानबारे जानकारी गराएका छौ उहाँहरुले नेपाल अत्यन्त सुन्दर छ भनेको र आकर्षित रहेको सुनेका छौ ।
घुम्ने इच्छा सबैले राखेका छन् । हामीले साँझ ४ बजे देखि प्रतियोगिता संचालन गर्नाले बिहान बिदेशी खेलाडीहरुले मन्दिर र डाँडाकाडा घुमेर आएका छन् यस प्रतियोगिता समापन पछि नेपाल घुम्छन होला ।
चेस गेम सम्बन्धि थोरै जानकारी सबैलाई बताई दिनुस् ?
चेस खेल एउटा बौद्धिक खेल हो । अन्य सबै खेलहरु शारीरिकले खेल्ने खेल हुन्छ भने यो अलि बौद्धिकता र मानसिक रुपले खेल्ने खेल भएको कारणले यसको छुट्टै खालको महत्व र पृथक खालको पहिचान छ। नेपालमा खेल्ने अरु खेलहरुको तुलनामा यो खेल धेरै खेलाडीहरु अझ भनौ भने बिद्यार्थीहरुको सहभागिता रहने खेल हो यो । यसमा हामीले धेरै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौ । त्यसमा पनि थुप्रै खेलाडीहरु सहभागी भइरहेका हुन्छन । यसबाट खेलाडीहरु आकर्षित हुनुका साथै खेलाडीहरु पनि बढ्दै गइरहेका छन्, खेलिपनी रहेका छन् । अब बिस्तारै प्रोफेसनल खेलाडीहरु अगाडी बढिरहेका छन् । निश्चित रुपमा नेपालमा सबै खेलहरुको कुरा हेर्ने हो भने खेलाडीहरुले खेलेरै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने स्थिति त देखिदैन त्यहीखालको समस्या यस खेलमा पनि छदै छ ।
तर चेसको भविश्य सारै राम्रो छ हाम्रो देश नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार सिमित बाबजुत पनि यो खेल खेलाउन सकिन्छ यसलाई ठुलो चौर वा ठुलो कवर्ड हल चाहिदैन धेरै खेलकुद सामाग्री चाहिदैन । ठुलो बजेट चाहिदैन त्यसैले यो खेल हाम्रो देशका लागि धेरै नै उपयुक्त खेल हो । यस खेलको राम्रो सम्भावना छ यसलाई राज्यले बुझ्न सक्नु पर्छ ।
यस खेलमा चेस क्लकको आवस्यकता हुन्छ । चेसमा प्रत्येक खेलाडीले सेतो गोट्टी र कालो गोट्टी चल्ने र आफ्नो गोट्टी चली सके पछाडी यो क्लक थिच्नु पर्छ र यो क्लक थिचेको आधारमा उनीहरुको प्वाइन्ट गणना गरिन्छ । १ घण्टा ३० मिनेटको समय हुन्छ, त्यो समय भरि उनीहरुले खेल्नु पर्छ । यो खेलमा समयको दबाब पनि हुन्छ जित हार पनि हुन्छ ।
प्रतियोगिताका लागि के–कस्तो साथ र सहयोग पाउनु भइरहेको छ ? समापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो चेसको प्रतियोगिता जुन हामीले आयोजना गर्यौ यसको खास उदेश्य भनेको नेपालमा चेसको बिकास गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली खेलाडीहरुलाई आफ्नो भूमिमा रहेर खेल्ने खालको बाताबरण बनाउने हो र अन्तरास्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल चेस एसोसिएसनले अन्तर्राष्ट्रिय चेस प्रतियोगिता पनि गर्न सक्छ भन्ने खालको सन्देश दिन पनि जरूरी छ ।
अब हामीले यो प्रतियोगिता आयोजना गरिरहदा हामीले राज्यको खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय, राज्यको विभिन्न मन्त्रालयदेखि यहाँका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुसंग पनि यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि आवश्यक सहयोग मागी रहेका छौ र सहयोग गरि पनि राख्नु भएको छ । यो बास्तवमा हामीलाई कतैबाट फन्ड पाएर आयोजना गर्न खोजेको होइन । हामीले सबै तिरबाट रकम संकलन गरेर त्यसैको माध्यमबाट हामीले यो सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यस कारणले गर्दा आर्थिक संकलनको लागि हामीमाथि प्रेसर छ तर पनि अहिलेसम्म त्यस्तो खालको आर्थिक श्रोत जुटीसकेको स्थिति छैन ।
यसको बाबजुत नेपाली खेलाडीहरुले धेरै सहभागिता भएर खेल्न पाइरहेको छ यसैमा हामीलाई सन्तुष्टि छ । यसमा सबै राज्यका खेलकुद सम्बन्धित निकायहरु तथा बिभिन्न प्रदेश, स्थानीय, केन्द्रीय सरकारहरु, मिडियाहरु, व्यापारिक घरानादेखि लिएर सबै व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुबाट हामी सहयोगको आशा गर्छौ । भोलिको दिनमा पनि चेसप्रति आकर्षित हुन, चेस प्रति लगाव हुन केही लगानी गरौ भनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।
यो हाम्रो प्रतियोगिताको समुद्घाटनमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यु आउनु भयो । उहाँले यस खेल प्रति दिलचस्पी दिएर हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति उहाँहरुको प्रत्यक्ष सहभागिताले हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै समापनको दिन कार्तिक २८ गते साँझ ५ बजे उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रि ईश्वर पोखरेल ज्यु द्वारा विजय खेलाडीहरुलाई पुरस्कार वितरण गर्नु हुनेछ, यसरी हामी यो कार्यक्रम सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्ने छौ ।